विपन्नका लागि विश्व बैंकको १९ अर्ब लगानीकाे जवाफदेही छैनन्, गरिबको नाममा कसले गर्‍याे मोज ? – अभियान पोष्ट
विपन्नका लागि विश्व बैंकको १९ अर्ब लगानीकाे जवाफदेही छैनन्, गरिबको नाममा कसले गर्‍याे मोज ?
गरिबीले पिल्सिएका नेपालीको आर्थिक उत्थानका लागि विश्व बैंकलगायतका दाताले दिएको रकमको चरम दुरुपयोग भएको छ । गरिबी निवारण कोषमार्फत ०६१ देखि ०७५ सम्ममा खर्च भएको २९ अर्बमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक काममा खर्च भएको छ भने समुदायमा लगानी भएको १९ अर्बको जवाफदेही कोही पनि छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्टकाे वाइलाइनमा खबर छ ।
घुम्ती कोषका सम्बन्धमा महालेखापरीक्षक कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखाले भनेको छ, ‘सामुदायिक संस्थाहरूलाई निश्चित अवधिसम्म रकम उपलब्ध गराई समुदायको जीवनस्तर उकास्नुपर्नेमा लामो समयसम्म एउटै संस्थालाई रकम उपलब्ध गराइएकाले कार्यक्रमको प्रभावकारितामा विश्वस्त हुन सक्ने देखिएन ।’
भ्रमणमा नगएको टोलीले हवाईटिकटको रकम कसरी भुक्तान भयो ? नयाँ पत्रिकाले एस ट्राभल्सको प्रतिक्रिया मागेको थियो । ‘भ्रमण रद्द भएमा टिकट काटेको रकमको निश्चित प्रतिशत काटेर अरू रकम फिर्ता हुन्छ, यो केसमा पनि रकम फिर्ता हुनुपर्ने थियो, तर भएन,’ ट्राभल्सका लाइन म्यानेजर अनिल धरेलले भने, ‘एयर इन्डियाले रकम फिर्ता नहुनुका कारण पनि दिएको छ, तर त्यो हामीलाई पनि त्यति चित्त बुझेको छैन । हामी त निश्चित नाफा लिएर टिकट काटिदिने हो, एयरलाइन्सले दिन नमानेपछि हामीले पनि फिर्ता दिएनौँ ।’
कोषमा भएको यो बेथितिबारे कोषका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मोहनमान सैंजू चिन्ता व्यक्त गर्छन् । ‘गरिबका नाममा गरिबी निवारण कोषमार्फत यति ठूलो अनुदान आएर काम भएको पहिलो हो । मैले जानेसम्म र कोषमा आबद्ध हुँदासम्म नेपालमा गरिबी निवारणमा कोषको ठूलो भूमिका थियो । यही देखेर नै विश्व बैंकले यति ठूलो पैसा दिएको हो । पछि के भए थाहा छैन, म आबद्ध रहँदासम्म कोषले नेपालको गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हो,’ उनी भन्छन् ।
गरिबी निवारण कोष र विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडा)बीच १४ सेप्टेम्बर २००४ मा एक करोड ५० लाख डलर (करिब एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँको) अनुदान सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै, तीन वर्षपछि ९ मार्च २००७ मा दुई करोड ५० लाख डलर (करिब एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ) थप भएको थियो ।
३१ जनवरी २००८ मा १० करोड अमेरिकी डलर (करिब सात अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ)को अनुदान सम्झौता भएको थियो । १३ जुलाई २०११ मा फेरि सात करोड ५० लाख (करिब पाँच अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ)को सम्झौता भएको थियो ।